डिभोर्स गरेकी युवतीसंग प्रेम परेका युवक जब तड्पी तड्पी… |
August 14, 2021 adminLeaveaComment on डिभोर्स गरेकी युवतीसंग प्रेम परेका युवक जब तड्पी तड्पी…
उसको यस्तो वचन सुनेर म अवाक् भएँ। म भित्रभित्रै टु’टिसकेको थिएँ, उसको व्यवहार देखेर। त्यसैले रि’सको झों’कमा मैले उसलाई भनिदिएँ, ‘तँ मेरो माया पाउन लायक पनि छैनस्।’मेरो कुरा सुन्नेबित्तिकै उसले फोन काटी। त्यसपछिका १० दिनसम्म हाम्रो बोलचाल भएन। १० दिनपछि भने आफैँलाई दिक्क लाग्यो र फेरि उसलाई सरी भन्दै बोलाउन खोजेँ। माफी त दिई तर ज्यादै इ’ग्नोर गर्न थाली। अरुसँग घण्टौँ गेम खेल्दै बस्छे। मैले जतिसुकै पटक नखेल्न आग्रह गर्दा पनि मान्दिन। बरु मैसँग खेल न त भन्दा पनि ऊ मान्दिन।
म इञ्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ। घरको आर्थिक अवस्था पनि राम्रै छ। तर ऊ डिभोर्सी भएका कारण घरमा बुबाआमाले मान्नु भएको थिएन। मैले उसलाई फकाएर अमेरिका जान मनाएँ। लुकेर पेपर म्यारिज गर्ने भनेको थिएँ तर ऊ मेरो कुरा सुनेर खुसी भइन। उसले भनी, ‘मलाई तिमीसँग जानु छैन।’उसको कुरा सुनेर म त छाँगोबाट खसेँ। उसलाई खुसी बनाउन र मसँग आओस् भनेर कयौँ प्रयास गरेँ तर मेरा सारा कोसिस बेकार भए। मैले एक दिन सोधेँ, ‘के तिमी अरु नै कसैलाई प्रेम गर्छौ ? गर्छौ भने भन।’ तर ढुंगा बोल्ला ऊ बोलिन।
अहिले त उसले मलाई फेसबुक, मोबाइल सबैतिर ब्लक गरेकी छ। मलाई उसको यादले हरपल सताउँछ। न त अहिले बोल्न नै सक्छु न केही सम्झाउन नै। मैले केही नगरे पनि सजाय भोग्दैछु। अब म के गरुँ ? ऊ बिना त बाँच्न पनि सक्दिनँ होला!श्रोत:शुक्रबार साप्ताहिक
काठमाण्डौ न्यूरोड गेटमा घट्यो अनौठो घटना।प्रहरी परे जिल्ल।
महिलाले पुरुषमा खोज्छन् यी ५ कुरा !प्रत्येक पुरुषले थाहपाउनै पर्ने
बिना कुनै ऋणको भारी बोकी घर बनाउने सोच्नु भएको छ?एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस,पछुतो हुनेछ नपढे